Naghachi Data si iOS Ngwaọrụ - Olee otú Iji
Naghachi Data si iOS Ngwaọrụ: Olee otú Iji
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iOS Ngwaọrụ na Computer
Ẹkedori Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị. Jiri eriri USB na-abịa na gị iOS ngwaọrụ jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka, gị na kọmputa. Site ndabara, Wondershare Dr.Fone maka iOS wil ịchọpụta gị iOS ngwaọrụ-akpaghị aka na-egosi na ị na window maka "naputa site na iOS Ngwaọrụ".
Atụmatụ: Tupu na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS, ị na-kwesŽrŽ ibudata ọhụrụ version nke iTunes. Iji zere na-akpaghị aka mmekọrịta, adịghị ẹkedori iTunes mgbe na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS. M atụ aro ka ị gbanyụọ automatical syncing na iTunes tupu: ẹkedori iTunes> Mmasị> Devices, ego "Prevent iPods, iPhones, na iPads si syncing na-akpaghị aka."
Ọ bụrụ na gị iOS ngwaọrụ bụ iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 1 ma ọ bụ iPod aka 4, ị nwere ike ịgbanwee gaa na "Advanced Mode" site bọtịnụ na ala-nri akuku. Mgbe ahụ na-eso ntụziaka na window ịbanye ngwaọrụ scanning mode: Jide ngwaọrụ gị, wee pịa Malite bọtịnụ> Jide Ike na Home buttons n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd> Hapụ Ike button ma na-Home button enwe.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị Ngwaọrụ maka Lost Data na ya
Nanị pịa "Malite iṅomi" button ka a usoro iṅomi gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ka ike iṅomi maka ehichapụ ọ bụ furu efu data. The scanning g usoro pụrụ ịdịru a nkeji ole na ole, na-adabere ego nke data na ngwaọrụ gị. N'oge scanning usoro, ọ bụrụ na ị na-ahụ na data ị na-achọ bụ n'ebe ahụ, mgbe ahụ ị nwere ike pịa "cheretụ" button kwụsị usoro.
Nzọụkwụ 3. ịhụchalụ scanned Data
Doppler ga-ewe gị oge ụfọdụ. Ozugbo ọ dechara, ị pụrụ ịhụ a Doppler N'ihi site usoro ihe omume. Data ma furu efu na ẹdude na ngwaọrụ gị na-egosipụta na edemede. Iji iyo si na-ehichapụ data na gị iOS ngwaọrụ, ị nwere ike swipe nhọrọ "Naanị gosipụta ehichapụ ihe" Gbanye. Site na ịpị faịlụ ụdị na n'aka ekpe, ị nwere ike ihuchalu hụrụ data. Ma i nwere ike ịhụ na e nwere search igbe n'elu nri nke window. Ịnwere ike ịchọ a kpọmkwem faịlụ site na iji kọmputa ede a isiokwu na search igbe.
Nzọụkwụ 4. Naghachi Data si gị iPhone / iPad / iPod aka
Mgbe ị na-ahụ data gị mkpa, dị nnọọ etinye ego akara n'ihu igbe iji họrọ ha. Mgbe ahụ, pịa "Naghachi" button na ala n'aka nri nke window. Site ndabara, natara data ga-azọpụta gị na kọmputa. Dị ka ozi ederede, iMessage, kọntaktị, ma ọ bụ na ndetu, mgbe ị pịa Naghachi, a mmapụta ga-ajụ gị ka ị 'Naghachi ka Computer "ma ọ bụ" Naghachi ka Ngwaọrụ ". Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị a ozi azụ gị iOS ngwaọrụ, pịa "Naghachi ka Ngwaọrụ".